Kalkaaliyaasha caafimaadka oo gabaabsi ka jiro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kalkaaliyaasha caafimaadka oo gabaabsi ka jiro
La daabacay tisdag 12 juni 2012 kl 14.50
Waxaa meelo badan oo ka mid ah dalka xagaagaan ka jira gabaabsi dhanka kalkaaliyaasha caafimaadka. Waxaana taas loo aanaynayaa is afgaran waa ka jira dhanka mushaaarad ay dalbadeen ardayda baratay kalkaalinimada ee hada jaamacada ka soo qalin jabiyey, kuwaas oo dalbaday ugu yaraan 24.000 oo koron bishii.
Sida uu sheegay Christer Thörnqvist oo wax ka dhiga Linköping universitet kuna xeeldheer amuuraha shaqo joojinta ayaa ku tilmaamay kacdoonka ay sameeyey ardeyda kalkaaliyaasha ee hada jamacadaha ka soo qalinjabey kuwo taariqiya.
- Tallabaday ardaydo qaaden waxay ahayd mid loo adkaystay inkastoo ay maalinba maalinta ka dabayso way ka sii adkaanayso, sababtoo ah ardayda hada jaamacada ka soo qalin jabiyey ma haystaan shaqooyin ay ku tiirsadaan iyo dhaqli midna. Marka hadoo kacdoonkooda sii daba dheeraado waxaa dhici karta in qaar ku qasbanaadaan in ay yeelan mushaar ka hooseeya 24 000 oo koron bishii.
Gabaabsiga kalkaaliyaasha caafimaadka waxaa la sheegay in ay ka jirto hosbitaalda ku yaala magaalooyinka waaweyn sida Stockholm, Göteborg iyo Malmö